ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်မကပါ။ ၎င်းသည်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသောဆန္ဒ (The Guardian) - Your Brain On Porn ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်
porn များ၏စိုးရိမ်ရေမှတ်ရုံလိင်ကျော်လွန်သွား - ကအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါအလိုဆန္ဒ (The Guardian သတင်းစာ) normalises
[အင်ဒရူးဘရောင်းအားဖြင့်] ဒီ sex အကြောင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကထက်အများကြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်းပြောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစိုင်အခဲကိန်းဂဏန်းများရရှိရန်ခက်ခဲပေမယ် 2009 အတွက်အမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားနှင့်အတူတကွထားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတအဖြစ်အကြီးစားအဖြစ်ပြောသောခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်စီးပွားရေး, ၏အရွယ်အစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စားသုံးမှုအနောက်ဘက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားနီးပါးလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ သောကြောင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကိုချက်ချင်းနေရာတိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည်။
အဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ကောင်းပိုကြီးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကစားနေလျှင်လူပျိုတို့, အွန်လိုင်းအခါသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်အတူကစားပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ ဒါဟာခန့်မှန်းခြေရဲ့ အင်တာနက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို 30% porn, တဦးတည်းကုမ္ပဏီ, Mindgeek ကအများစုယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လူတွေကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းမဆိုအန္တရာယ်မငြင်းပယ်သို့သော်လူ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်လုံးဝထူးခြားသောစေမယ်လို့ - ကမဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သိသာထုတ်လုပ်သူထဲကဆုရရှိသူနှင့်အရှုံးသမားစေသည်, နှင့်အရှုံးသမားအချို့အလွန်ကြီးသောသဘောတူညီချက်ရှုံးသည်။ သို့သော်ကဖောက်သည်ဘာလုပ်သလဲ, ကွန်ဆာဗေးတစ်များသောအားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအထူးသဖြင့်ပြုမူသောအမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုကြောင်းငြင်းခုန်။
နိုင်ငံရေး၏ pornification ကျွန်တော်တို့ကို Donald Trump ပေး၏ကားအဘယ်သို့
အမေရိကန်စာရေးဆရာလှံတံ Dreher ရေးသားခဲ့သည်: "ကျနော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှခဲ့ဘယ်တော့မှကြောင့်ရှေ့တော်၌သမိုင်းအတွက်, ကြိုးစားခဲ့ဖူးကြောင်းအစွန်းရောက်စမ်းသပ်မှုပို့ချလျက်ရှိသည်။ အဘယျသို့ရုပ်ပုံများကိုရသောအခါတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဖြစ်ပျက် - ရွေ့လျားပုံရိပ်တွေ - အရှိဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းများနှင့်အကြမ်းဖက်လိင်၏စိတျကူးပြုမူချက်ချင်းသည့်အချိန်တွင်မဆို, ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သူမဆိုဝင်ရောက်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်, ငါတို့နှလုံးသားများမှအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ဒါကြောင့်တစ်ဦးကလူအဖြစ်ကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်သနည်း "
ကက်သလစ်ကိုယ်ကျင့်တရားဓမ္မပညာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်အဖြစ်, Dreher သူတို့ကိုယ်သူတို့မှားသောသူအချို့လုပ်ရပ်တွေကသူတို့ဖျော်ဖြေထားတဲ့နှင့်အတူသမျှစိတ်ရင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များရှိပါတယ်ယုံကြည်သည်။ ငါမကျင့်။ ဒါဟာ porn ၏မမှားလုပ်ရပ်များအတွက်ဒါပေမဲ့သဘောထားတွေတည်ရှိသည်ငါ့ကိုပုံရသည်။ ဖှအရွယ်ရောက်လူကြီးနှင့်သဘောတူညီခကျြနှစျခုလုံးကိုအလွယ်တကူနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်မဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနယ်နိမိတ်မရှိဘဲအယူအဆများမှာသော်လည်းလွတ်လပ်စွာသဘောတူသမျှနှစ်ဦးစလုံးတည်ရှိမပြုကြပေမည်။ အဘယ်အရာကို 15 နှစ်အရွယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားဖြင့်နှင့်သူတို့၏ရွယ်တူအသုံးပြုပုံသို့ဖိအားပေးနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်လည်းကောင်းလူကြီးများဖြစ်ကြသို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာဖှဟန်ဆောင်နေဖြင့်ကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါတောင်မှသူကဖိအားနဲ့မှားယွင်းတဲ့သောခေါင်းပုံဖြတ်သည်။ ဒါပေမယ့်အနိုင်ကျင့်ဒီလိုမျိုးတရင်းတနှီး porn နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
porn လောကီသားတို့သည်အသီးအလိုဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သလိုကျေးဇူးတင်မှုရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာတဦးတည်းဖြစ်၏ ဒါပေမယ့်အားလုံးအလိုဆန္ဒနှင့်အကျေနပ်ရပါမည်နိုငျသောယုံကြည်ချက်အခြေခံကျကျမှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုသူ့ဟာသူဖြစ်၏ မဆိုအထူးသဖြင့်အလိုဆန္ဒ၏မှားယွင်းတဲ့လျော့နည်းအရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းဖောက်သည်အမြဲပထမဦးဆုံးကြွလာသောနိယာမပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအဘယ်သူမျှမဖောက်သည်လိုလားသောအရာကိုထက်ပိုအရေးပါပါတယ်။ ဤသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ porn ထုတ်လုပ်ရန်သောသူတို့အားကြောက်မက်ဘွယ်သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှ, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နေသောလူစေပါတယ်။ သို့သော်ဆန္ဒပြည့်စုံချက်၏လောကဓာတ်၌မိမိတို့နည်းနည်းအားလပ်ရက်ကိုကမ်းလှမ်းနေသောစားသုံးသူပြုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလည်းရှိသေး၏။ တချို့ကအဲဒီမှာထွက်ခွာချင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအတော်များများအခမဲ့လှုပ်ရှားမှုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလိင်မှချုပ်ထားပေမယ့်သင်တန်းပြုလုပ်မဖြစ်ခဲ့ကြသည်လျှင်ပင်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါလိမ့်မယ်။
အရာအားလုံး၏ pornification စီးပွားဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာ-supported အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိင်အကြောင်းကိုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ထိန်းချုပ်မှု, လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်၏စိတ်ကူးယဉ်ယခုအားလုံးစီးပွားဖြစ်အရောင်းအထဲတွင်စံပြဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဘာလုနီးပါးတိုင်းကြော်ငြာကတိတော်များဖြစ်ကြသည်။ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်၏ frictionless ရှင်းရှင်းအဆင်ပြေကမ္ဘာကြီးအော့ဖ်လိုင်း trudging နှင့်ညှိနှိုင်းဖို့ထက် porn ဖို့အများကြီးပိုနီးစပ်သည်။
နိုင်ငံရေး၏ pornification ကျွန်တော်တို့ကို Donald Trump ပေး၏ကားအဘယ်သို့: သူသည်အဘယ်သူ၏ထငျဥပဒကြီး omnipotent အာဏာရှင်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပြုမူရသောတစ်ဦး "အဖြစ်မှန်" ပြပွဲကတဆင့်အများပြည်သူပုံကဲ့သို့မိမိကိုမိမိတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့် "အဖြစ်မှန်" တီဗီများ၏နှင့်ကြော်ငြာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, အစစ်အမှန်လောကရှိလက်တွေ့အနည်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသကဲ့သို့ထိခိုက်သည်နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာက related သောအရာတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇအတိုင်းကိုမှောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
porn လိုပဲ, ကရှည်လျား ့. မရနိုငျသောအစာစားချင်စိတ်ကိုသာကျနော်တို့ကလုပ်ကျွေးသော Phantom အပေါ်ကြီးထွားလာရာတစျခုကြှေးမှေး။ ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာမျှမျှတတလူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှအရာအထီးကျန်လူများအတွက်ဖွင့်မယ့်နှစ်သိမ့်အဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်၏စိတ်ကူးဒါကြောင့်အန္တရာယ်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ပျက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပင်ဖြစ်သည် (နှင့်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်အမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးင်) porn-ish စိတ်ကူးယဉ်အစစ်အမှန်ဘဝ၌ပျော်မွေ့မရနိုငျသောစိတ်ကျေနပ်မှုကမ်းလှမ်းများနှင့်အရာများအတွက်, ဒါကြောင့်, စစ်မှန်သောဘဝလုံးဝအစားထိုးလို့မရပါဘူး။ ဟုတ်မဟုတ်